स्लिम बन्न यस्तो उपाय रोज्दै वर्षा राउत - Sidha News
स्लिम बन्न यस्तो उपाय रोज्दै वर्षा राउत
काठमाडौं। चलचित्र करियर सुरु गर्दा वर्षा राउत स्लिम नै थिइन् । उनमा चलचित्र आउनका लागि अत्यन्तै राम्रो बडी, अभिनय कला, कौशलसहित सुन्दरता भएकै कारण पनि उनी नायिकाको अभियनबाट नेपाली चलचित्र उद्योगमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल पनि भईन । तर अभियानबाट उनको जिवन चल्दै जाँदा विविध कारणले उनको शरिरको वजन बढ्दै गयो ।
मोटाएको शरिरलाई दर्शक तथा चलचित्रका सहकर्मीहरुले समेत जिस्क्याउन थालेपछिउनी आजकल पुनः ‘स्लिम’ हुने दबाई खोज्दै भौतारिन थालेकी छन् । यतिसम्म की केही चलचित्र मोटाएकै कारणले छोड्नु परेको अनुभव संगालेकी अभिनेत्री राउत चौका दाउ फिल्ममा मुख्य सोलो हिरोइन बनेपछि अभिनेत्री बर्षा राउत दंग छिन् ।
स्लिम’ बन्ने दौडमा उनले कुनै त्यस्तो चटके दबाई त भेटिनन् तर उनलाई जिमले ‘स्लिम’ बनाउन सक्छ भन्ने ज्ञान भएकै कारण सिधा उनी जिम गर्ने ठाउँमा छिरिन र जिमकै माध्यमबाट शरिरको मोटोपन घटाउने अभियानमा लागेकी छन् । आजकल उनलाई कसैले ‘मोटी’ भन्यो भने उनी रिसाउँछिन तर निकै दुब्लाउनु भएछ भन्यो भने निकै खुशीसाथ दंग पर्छिन।
नायिका वर्षा राउतले कहिलेकाही सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा फ्यानका प्रश्नको जवाफ दिने गरेकी छिन् । तर, यसपटक भने उनलाई एकजना फ्यानले अचम्मको कुरा सोधे । नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका पूजा शर्मासँग नजिक रहेकाले पनि वर्षालाई फ्यानले यी दुइको प्रेम सम्बन्धको बारेमा प्रश्न सोधेको हुनुपर्छ ।
वर्षालाई फ्यानको प्रश्न थियो–‘आकाश र पूजा प्रेममा छन् भन्ने सुनिन्छ । तपाई दुबैजनासँग यति नजिक हुनुहुन्छ ? यसैले सोधेको ।’ फ्यानको यो प्रश्नको जवाफ वर्षाले आकाशलाई नै दिन लगाएकी छिन् । जसमा आकाशले भनेका छन्–‘हेरौ भविष्यमा के हुन्छ ।’वर्षाले अहिलेको अवस्थामा के छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेकी छिन् ।
जसमा आकाशले रमाइलो जवाफ दिदै भनेका छन्–‘हामीले बिहे गरिसकेका छौं ।’ आकाशले यो जवाफ दिइसकेपछि वर्षाले म यो इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्नेवाला छु भनेर जवाफ दिएकी छिन् । आकाशले दिएको जवाफलाई फ्यानले के भनेर वुझ्ने ? सायद, यसको जवाफ आकाशले अझै गज्जबले देलान्।